Antenimierandoholona : hapetraka amin’ny fomba ofisialy ireo senatera | NewsMada
Antenimierandoholona : hapetraka amin’ny fomba ofisialy ireo senatera
Hotanterahina, anio etsy amin’ny lapa maitso Anosikely, ny fametrahana samboady ireo loholona voafidy, ho an’ny faritanin’Antananarivo. Homarihina amin’ny lanonana tsotra arahin’ny lahatenin’ny filohan’ny Antenimierandoholona izany.
Hotanterahina ny 2 mey kosa ny fametrahana amin’ny fomba ofisialy ireo loholona ho an’ny faritanin’i Mahajanga sy Toamasina ary Fianarantsoa.
Tsy mbola voafaritra mazava kosa ny fotoana hanaovana izany, ho an’ireo loholona any Antsiranana sy Toliara.
Niaiky ny tompon’andraikitra etsy Anosikely fa mbola ao anatin’ny fitsitsiana tanteraka ity andrimpanjakana mpanao lalàna ity ka nahatonga azy ireo hanao lanonana tsotra. Na izany aza, nambaran’izy ireo fa zava-dehibe ny fametrahana samboady ahitana ny sainam-pirenena, maitso, fotsy, mena. « Voninahitra lehibe izany sady efa fanao mahazatra koa eo anivon’itony andrimpanjakana itony », hoy ihany ny tompon’andraikitra.
Tsiahivina fa anisan’ny nanakianan’ny loholona, Andriamandavy Riana, ny loholona Lylison ny nanaovan’ity manamboninahitra ity samboady tamin’ny fanamarihana ny 29 marsa teo, tetsy Ambohijatovo. Tsy mbola tokony ho nanao izany ny loholon’i Mahajanga satria tsy mbola nosalorana izany avokoa ireo senatera rehetra.